| ဖန်ဆင်းရှင်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ကိုးကား APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » quotes ဖန်ဆင်းရှင်
Quotes ဖန်ဆင်းရှင် APK ကို
ရုပ်ပုံနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးများကိုသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုမျှဝေပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်သည်သင်၏ကိုးကားဖန်တီးဖို့အကောင်းဆုံးကိုးကားထုတ်လုပ်သူ App ဖြစ်ပါတယ်ကိုးကား။ Instagram ကိုများအတွက်လှပသောတကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးစာသားကိုပုံနဲ့စကားပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးပါ။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှကဗျာသို့မဟုတ်ကိုးကား Add နှင့် Instagram ကိုအပေါ်သင်တို့၏အကြံအစည်မျှဝေပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေစာ, လိုဂိုနဲ့ QR code.Quotes ဖန်ဆင်းရှင်ကမ္ဘာနှင့်သင့်ကိုးကားဖန်တီးမျှဝေဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောနောက်ခံ, စာသားအရောင်အဆင်း, စာသားအရွယ်အစားနှင့်စာလုံးတွေအဖြစ်ရွေးချယ်စရာစိတ်ကြိုက်အတူဖန်ဆင်းရှင်အဆင်သင့်ကိုးကား, သို့မဟုတ်သင်နောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံပြခန်းမှသင်၏ဓါတ်ပုံကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုးကားမျှဝေနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ကိုးကား, ကဗျာ, စိတ်ခံစားမှု, အတွေး, haiku သို့မဟုတ်အရေးအသားမဆိုကြင်နာရေးရန်နှင့်ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်း tools တွေကိုသုံးပြီးအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရေးသားချက်များသို့သူတို့ကိုငါဒီဇိုင်း။ လှပသောနောက်ခံနှင့်သင်၏ကိုးကားမျက်စိ-ဖမ်းလုပ်ပါ။ quote ဖန်ဆင်းရှင် app ကိုသင့်ရဲ့ကိုးကားညီဆုံးနေ့စွဲ 1000 + လှပသော HD ကိုပုံရိပ်တွေရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းနောက်ခံအဖြစ်အစိုင်အခဲအရောင်နဲ့ gradient ကို၏အင်္ဂါရပ်များကဆက်ပြောသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးဿုံကောင်းသောဒီဇိုင်း (UI ကို) နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတည်ဆောက်ကိုးကား။ ဒါဟာလွယ်ကူပါတယ်, အကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးပြုသူကိုးကားမီးစက်နှင့်အစဉ်အဆက်ကိုးကားထုတ်လုပ်သူ app ကိုဖော်ရွေပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုးကားစိတ်ကြိုက်ပြီးနောက်, သငျသညျ Instagram ကို, Facebook, Twitter WhatsApp ကိုသို့မဟုတ်အခြား app တွေကနေတဆင့်ကမ္ဘာကြီးကိုအတူ / ရှယ်ယာကယ်တင်နိုင်ပါ။
- ပြခန်းကနေအံ့သြဖွယ်နောက်ခံ Set များနှင့်ရုပ်ပုံပေါ်တွင်သင်၏အဖိုးတန်စကားများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူမျှဝေပါ။
- ကျနော်တို့အာဏာပိုင်များနှင့်အကြောင်းအရာများအားဖြင့်လှပသော Inspiration, လှုံ့ဆျောမှု, ဘဝနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ Quotes နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ကိုးကားစာကြည့်တိုက်ပေး။ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံပေါ်တွင်ဖှယျကိုးကားထားနိုင်ပါတယ်။
- တညျဆောကျဖောင့်နှင့်နောက်ခံတင်းပလိတ်များအတွက် 55 + Amazing ။
- သင် font ကိုအရောင်အဆင်းနဲ့ Size ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
- ပုံရိပ်တွေမှဖှယျစကားလုံးများကို Add
- ဓာတ်ပုံများစာတန်းများ Add
- သင် Blur, Brightness ကို, Saturation က, သင့်နောက်ခံမှ Contrast နဲ့အရောင်များနှင့်တူဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေးနိုင်ပါသည်။
- သင်ကနောက်ခံအဖြစ်သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်နဲ့အရောင် gradient ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
- Instagram ကို, Facebook, Twitter WhatsApp ကိုများနှင့်အခြား app များကိုအတူဝေမျှမယ်။
- 100 + ထူးခြားတဲ့နှင့်ဖန်တီးမှုဖောင်ရွေးချယ်မှု
- သင်အရည်အသွေးမြင့်နောက်ခံ collection များကိုထံမှနောက်ခံကိုရွေးချယ်ပါနိုင်ပါတယ်။
- သင့်ကိုယ်ပိုင် template ကိုကယျတငျနိုငျ
- တန်းပလိတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲ: ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး template ကိုထားပါ။
- ကျပန်းစိတ်ကူးကိုးကား Choose
- ကျော်ကြားသောစာရေးဆရာများကကိုးကား၏ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်း, အနုပညာရှင်, သိပ္ပံပညာရှင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့နှင့်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ။
ဒီနေရာတွင်ကလူ Quotes ဖန်ဆင်းရှင်ကိုအသုံးပြုဖို့ကိုဘယ်လိုဖွင့်
- ဓါတ်ပုံကိုစာသား Add
- နေ့စဉ်ဖှယျကိုးကား Create
- ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကျော်ကစာသား Add နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်စာတန်းများကိုရေး
- လူမှုမီဒီယာချီတက် - Facebook မှာအဖုံးစာမျက်နှာ, Youtube, Twitter ကို
- instagram သို့မဟုတ် insta ကိုးကားများအတွက်ကိုးကားဖန်တီးဖို့အကောင်းဆုံး app ကို။
- ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်ရေစာထည့်ပါ။ သငျသညျပုံရိပ်အပေါ်စာသားကိုရေစာ, ဓာတ်ပုံကိုရေစာ, လိုဂိုနဲ့ QR ကုဒ်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
- ကိုးကားနောက်ခံပုံများ Create
- Inspiration, စိတ်ခွန်အားနိုး, ချစ်ခြင်း, အသက်, အောင်မြင်မှု, ဝိညာဉ်ပျော်ရွှင်မှုကို, ရယ်စရာ, ချစ်ကြည်ရေးနှင့်အပြုသဘော HD ကိုကိုးကားဝေါလ်ပေပါကိုဖန်တီးပါ။
- Write ကိုးကား, ကဗျာ, တိုတောင်းသောပုံပြင်များ, အတှေးအပြီးအများကြီးပို။
20 အရည်အသွေးမြင့်နောက်ခံပုံများနှင့်နောက်ခံ packages များရှိပါသည်။
1 ။ အနုညာဆိုင်ရာ
2 ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်
3 ။ သဘာဝ
4 ။ ည
5 ။ အလင်း
6 ။ ရောင့်ဂီတ
7 ။ ယက်သား
8 ။ စက္ကူ
9 ။ Dreamy
10 ။ ကြယ်
11 ။ space ကို
12 ။ ခရစ္စမတ်
13 ။ နွေဦး
14 ။ ဆောင်းရာသီ
15 ။ ဂျီဩမေတြီ
16 ။ ဆောင်းဉီးရာသီ
17 ။ မိုးအုံ့သော
18 ။ ရေအရောင်
19 ။ ပန်းအသွေးအရောင်
20 ။ ပိုစတာတက်ကဲ့ရဲ့
တုံ့ပြန်ချက် & အကြံပြုချက်
လူအပေါင်းတို့သည်အထောက်အပံ့နှင့်အကြံပြုချက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကျယ်အရေးကြီးပါတယ်ကျနော်တို့ဒီ app ကိုကြောက်မက်ဘွယ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
feedback@quotescreator.com အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ - ငါတို့သည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်ချက် / အကြံပြုချက်ကိုချစ်!
Instagram ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကို @QuotesCreatorApp ရှာဖွေတာငါတို့ကြောက်မက်ဘွယ်ပြခန်းနှင့်အတူ "Inspiration နေပါ, အတုယူ Get" ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများက Instagram ကိုအပေါ် #QuotesCreator ရှာဖွေခြင်းဖြင့်အောင်ခဲ့ကြသောအရာကိုအထဲကစစ်ဆေး!
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီဖို့အတတျနိုငျဆုံးလိမ့်မယ် - feedback@quotescreator.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိဖို့!
- Filter ကိုတိုးတက်မှု
- Added ပိုစတာနောက်ခံပက်ကေ့
- မိုင်းနားဘာဂ် Fixed
37.91 ကို MB
Piyush Patel က
Pro ကို TextO - ရေးရန် ...